YEYINTNGE(CANADA): Friday, October 11
တက္ကသိုလ်များ ချန်ပီယံလိခ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှငြင်သာတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ နူတ်ထွက်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/11/2013 1 အကြံပြုခြင်း
အာဆီယံ မယ် ရတဲ့ မအိရူပါဝင်းပန်ကြားချက်
ကျွန်မ မြန်မာပြည်မှမွေးပြီး မြန်မာပြည်မှ ကြီးပါတယ်။
အဖေဘက်က အဘိုးနဲ့ အဘွားက တရုတ်စစ်စစ်ပါ။
အမေဘက်က အဘိုးက တရုတ်သွေးများပြီး ပြင်သစ်တစ်မတ်ဖိုးလောက်စပ်ပါတယ်။ အဘွားကတော့ မြန်မာပြည်ဖွား ကရင်တိုင်းရင်းသူစစ်စစ်ပါ။ အဲဒီဘိုးဘွားလက်ထက်ကစလို့ မြန်မာပြည်မှာ အခြေချခဲ့တာပါ။ ဥပဒေတွေကြောင့် မြန်မာပြည်ရောက် တတိယမျိုးဆက်ဖြစ်လင့်ကစား
တရုတ်-ကရင်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ခံယူပါတယ်။
မြန်မာပြည်ပမှာတော့ ဘယ်သူလာမေးမေး မြန်မာနိုင်ငံက
မျိုးရိုးဇာတိအရ ကျွန်မရဲ့ အဘိုးက တယုတယနဲ့ မှည့်ပေးခဲ့တဲ့
Yang Bao Ling (楊寶玲) ဆိုတဲ့ တရုတ်နာမည်လည်းရှိပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အမေရိကန်မှာ ပညာသင်နေတဲ့ကာလတလျှောက်လုံး
ကျွန်မ အာဆီယံမှာ နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုခဲ့တုန်းကလည်း
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တရုတ်လို့ မခံယူပဲ မြန်မာစိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်စားပြုခဲ့တာပါ။
အခု မြန်မာပြည်က ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ မြန်မာကို ကိုယ်စားပြုဦးမယ့် မယ်တစ်ယောက် ရွေးချယ်ထားပြီးပါပြီ။
သူ တရုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်
၊ မြန်မာပြည်မှာမွေးပြီး မြန်မာပြည်မှာကြီးတာပါ။
သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာ မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုတဲ့ အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်ကို
ထည့်ထားပြီး အကောင်းဆုံးယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။
ကျွန်မတို့တတွေ သူ့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြီမို့ သူ့အပေါ်မှာ
ယုံကြည်ချက်လေးထားပြီး လိုအပ်ချက်တွေကို အပြုသဘော
တက်ကြွရွှင်လန်းဂုဏ်ယူစွာ ထမ်းဆောင်ခွင့် ပေးစေချင်ပါတယ်။
ပြိုင်ပွဲဝင်တိုင်းအတွက် စိတ်ဓာတ်ရေးရာ ခိုင်မာဖို့ အများကြီးအရေးကြီးပါတယ်။
ကိုယ်စားပြုယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ကို တရားဝင် လက်ဝယ်ရထားပြီးဖြစ်တဲ့
မိုးစက်ဝိုင်အပေါ်မှာ မေတ္တာထားပြီး တတ်နိုင်သလောက် အားပေးပံ့ပိုးပေးကြပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။
မှတ်ချက်။ ။ ဒီလိုရှင်းရှင်းလေးလုပ်လဲရပါတယ်။ရှမ်းမြန်မာတွေဘာတွေပြောင်းပြစရာမလိုပါဖူးနော်...
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 10/11/20130အကြံပြုခြင်း
မိုးစက်ဝိုင် မော်စကိုမြို့သို့ရောက်ရှိလာပါက ရည်းစားစကားပြောမည်ဟု တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆို
ခွက်ကလေးနဲ့ ငှဲ့သောက်ပါ အဘရယ်
ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးဥာဏ်ဝင်း Carlsberg ဒိန်းမတ်ဘီယာစက်ရုံပန္နက်တင်အခမ်းအနားတွင် Carlsberg ဘီယာအား အမှတ်တရ စမ်းသပ်သောက်သုံးနေစဉ်။
တောင်ငူ၊ အောက်တိုဘာ ၁၁
အောက်တိုဘာ ၁၁ ရက်နေ့ ည ၈နာရီ ၅၀ အချိန် တောင်ငူမြို့ ၁၇ ရပ်ကွက်၊ ကန်လမ်းရှိ ချမ်းမြေ့ဧည့်ရိပ်သာတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာ အမျိုးသားတစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါဧည့်ရိပ်သာ၏ အပေါ်ထပ်အခန်းနံပါတ် (၆)မှပေါက်ကွဲခဲခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းအခန်းတွင် တည်းခိုသူ မြို့မ(၄) ရပ်ကွက် ညောင်လေးပင်မြို့နေသူများဖြစ်ကြသော မယုခိုင်(ဘ) ဦးသိန်းဝင်း( ၂၄ နှစ်) မှာ အပြင်းအထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး မငြိမ်းသီတာ(ဘ) ဦးခင်မောင်သန်း(၂၇) မစိုးရိမ်ရ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး တောင်ငူခရိုင်ပြည်သူဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ၄င်းအခန်း ၆ နှင့် ကပ်လျှက် အခန်း (B) တွင်တည်းခိုသူ နေမျိုးကျော် (၂၉နှစ်) (ဘ)ဦးကျော်လွင် ဌက်ပျောတောကျေးရွာ လယ်ဝေးမြို့နေသူမှာ ပွဲချင်းပြီးနေရာတွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
Reference and Credit to -ဓာတ်ပုံ-ကိုကျော်စွာ
Posted By Admin Team[https://www.facebook.com/newsofmyanmar]
ငြိမ်း/အထူးဒေသ ၀၀၁ ဇိမ်ခံကားလေး တစင်း
ဒီနေ့ ညဘက် ရပ်ကွက်ထဲ လမ်းလျောက်ကြည့်တယ်။
မီးမှောင်မှောင် ဓါတ်တိုင်တွေအောက် လျောက်နေတုံး အနားမှာ ကပ်ကျော်ပြီး တုန့်ကနဲ ရပ်လိုက်တဲ့ ဇိမ်ခံကားလေး တစင်း.. . . .
ကားမောင်းလာတဲ့လူက သံရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းရှင် မွတ်တား ကုလားလေး တဦး. . .
ကား နံပတ်ကို အမှတ်မထင်မြင်မိ . . ရင်မှာ ထိသွား. . . . .
ငြိမ်း/အထူးဒေသ ၀၀၁ ဆိုပဲ. . .
မွတ်တားတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး အသီးအပွင့်တွေကို ခံစားနေရပေပြီဟု မြန်မာ နိုင်ငံသားစစ်စစ်
ကျနော် ဓါတ်တိုင်အောက် အမှောင်ထုတွင်း တဖျတ်ဖျတ် ခြင်ရိုက် ရင်း အတွေး တစ ပေါ်မိပါသည်။
သံတွဲ၌ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ရခိုင်များအား ထောင်ပြောင်း
၁၁၊ အောက်တိုဘာ ၊ ၂၀၁၃။ Coral Arakan News
သံတွဲပဋိပက္ခများအတွင်း အခြေမမြစ်မရှိဘဲ စွတ်စွဲကာ ဖမ်းဆီးထားသော သံတွဲ RNDP ဥက္ကဌ ဦးမောင်ပုအပါအ၀င် ဆယ့်ခုနှစ်ဦးတို့အား ယနေ့နံနက် တစ်နာရီအချိန်ခန့်က ကျောက်ဖြူထောင်သို့ပြောင်းရွေ့လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
RNDP ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအေးမောင် အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့က ဦးမောင်မောင်ပုနှင့် အခြားအကျဉ်းကျနေသူများအား သံတွဲထောင်တွင် တွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့သည်။
သံတွဲ၌ ဖမ်းဆီးခံရသူများ အနက်နှစ်ဦးကို အချက်ပေါင်းတစ်ရာကျော် ညှင်းပမ်း နှစ်စက်ခံ ရကြောင်း လည်းသိရသည်။
နေစိုးမောင် ဟာစစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေရဲ့သမီး၊ ကြည်ကြည်ရွှေ (ခေါ်) မသြ ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သလို၊ ဆိုးသွမ်းအကြမ်းဖက်လူငယ် နေရွှေသွေးအောင် (ခ) ဖိုးလပြည့် ရဲ့ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ မသြ ဟာခင်ပွန်းဖြစ်သူ နေစိုးမောင်နဲ့အဆင်မပြေဖြစ်နေတာကြောင့်၊ မသြရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက် နာမည်ကြီးစီး ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး တေဇ ကအစွမ်းကုန်ပြုစုဂရုစိုက်ပေးလျှက်ရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းက နေစိုးမောင်ဟာ ယောင်္ကျားကိုယ်နဲ့မိန်းမစိတ် ( မိန်းမလျှာ ) ဖြစ်နေလို့ပါ။ စစ်ဆေးရုံ အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လောကမှာ သူကိုယ်တိုင်ကြေငြာခဲ့ခြင်းရှိခဲ့ပါသည်။
ဖိုးလပြည့်ဟုလူသိများသော တိုင်းပြည်အား သံလက်သီးဖြင့် အကြမ်းဖက် အုပ်ချုပ်ကာ ယခု စာဖတ်နေသူ၏ မြေးထီးကြီး နေရွှသွေးအောင်မှာ အလွန်ကြီးမားသော မြေအောက်ဂိုဏ်းကြီးတခုအား ပိုင်ဆိုင်ကြောင်းသိရသည်။
သူသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ဖိုးလပြည့်သည် ၀တ်မှုံန်ရွှေရည်ဆိုသော တိုင်းရင်းသူ သရုပ်ပြမယ် လေးအား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နှစ်သက်ကြောင်း တရားဝင် သူ၏ သူငယ်ချင်းများဖြစ်သော ခရိုနီ ကြက်ဆူပင် နှင့် လက်နက်ကုန်သယ်ကြီး ဦးတေဇ၏ သားများပြောပြခဲ့ဘူးသည်။
ဖိုးလပြည့်သည် ခရိုနီကြီး ဦးတေဇ၏ သားနှစ်ယောက်နှင့် မကြာခန ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် လေယာဉ် အဆင်းတက်မရှိတော့သည် ည ၁၀ နာရီနောက်ပိုင်းတွင် လေယာဉ်ပြေးလမ်းပေါ်ဝယ် သူတို့၏ ဖယ်ရီယာ ပြိုင်ကားများအား မောင်းနှင်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပလေ့ရှိပြီး လေယာဉ်ကွင်းအား အသုံးပြုရန် လေတပ် ဦးစီးချုပ်မှခွင့်ပြုထားစေခဲ့ပြီး လုံခြုံရေးအစောင့်များပါ အင်အားဖြည့် ချပေးခဲ့သည်။ ၄င်းတို့၏ ပြိုင်ပွဲသည် ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးပြီးသည့်နောက်ပိုင်းတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လော သုံးသန်းထိပင် လောင်းကြေးရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာ့အာဏာရှင်များအား စောင့်ကြည့်နေသည် နိုင်ငံခြားသတင်းထောက်ကြီး ဘာတိလင်တနာက စာရေးသူအား ပြောပြဘူးသည်။
၂၀၁၀ သင်္ကြန်အကြတ်နေ့ ကန်တော်ကြီးပတ်လမ်းပေါ်ရှိ X20 မဏ္ဏပ် အနီးတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့သည်မှာ နေရွှေသွေးအောင်၏ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း စစ်တပ်နှင့် သက်ဆိုင်သော အသိုင်းဝိုင်းတခုမှ ယခု သြစတေးလျှနိုင်ငံသို့ ခိုလှုံဝင်ရောက်ကာ နေထိုင်နေသူက စာရေးသူအားပြောခဲ့ဘူးသည်။
ဗုံးပေါက်ကွဲမှုကြောင့် အမျိုးသား ၅ ဦးနှင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦး သေဆုံးပြီး လူပေါင်း ၁၇၀ ကျော် ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာ ရရှိခဲ့သည်ဟု နအဖက သတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ သို့သော် မသက်ဆိုင်သူများအား ဖမ်းဆီးကာ နိုင်ငံတကာတွင် ရာဇ၀င်လူဆိုးများသဖွယ် ထုတ်ဖေါ်ပြသကာ အစားထိုးပြခဲ့သည်။
သန်းရွှေ၏ မြေးဖိုးလပြည့်(ခ) နေရွှေသွေးအောင် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆနေကြပြီး ၊ သူ မကျေနပ်သော ဗိုလ်ချုပ်သားများကို လုပ်ကြံခြင်းဖြစ်ကြောင်း အတွင်းသတင်းအဖြစ် ပြောဆိုနေခဲ့ကြသည်။
နအဖ စစ်အစိုးရက ယင်းဗုံးပေါက်ကွဲမှုသတင်းကို ပြည်တွင်း မီဒီယာဂျာနယ်များတွင် အကျယ်တ၀င့်ဖော်ပြရန် ညွှန်ကြားနေကြောင်း၊ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးများ၌ပင် ကြီးမားစွာ ဖော်ပြခိုင်း နေကြောင်း၊ ဤပေါက်ကွဲမှုသည် မိမိတို့နှင့်မသက်ဆိုင်၊ မိမိတို့တွင်တာဝန်မရှိ ၊ မိမိတို့၏လုပ်ကြံခြင်း မဟုတ်ကြောင်း သိသာစေရန် နအဖစစ်အစိုးရ၏ ကာကွယ်မှုတစ်ရပ်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူများအကြား ပြောဆိုဝေဖန်လျှက်ရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
အဆိုပါ ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနောက်ပိုင်း မဏ္ဍပ်အနီး ကင်မရာ ကိုင်ဆောင်ထားလို့ဆိုပြီး စာရေးဆရာ လင်းယုန်မောင်မောင်ရဲ့ မြေးဖြစ်သူ စည်သူဇေယျကို ဖမ်းဆီးခဲ့သလို ဖခင်ဖြစ်တဲ့ ဦးဇေယျကိုလည်း ဖမ်းဆီးထားခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁၁ နေ့တွင် သန်းရွှေမြေး နေရွှေသွေး (ခ) ဖိုးလ ပြည့် နဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ဆီကလုထားတဲ့ ရည်းစား ၀တ်မှုံရွှေရည် တို့ က မိုးကုတ်မှာရှိတဲ့ ဦးပိုင် က လုပ်နေတဲ့ ကျောက်တွင်းတွေကို လာရောက် ကြည့်ရှုမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် မိုးကုတ်ကားလမ်းများကို ပြင်ဆင်နေတယ်လို့ သတင်းဝင်လာခဲ့ဘူးပါတယ်။
တပ်မတော်သားများလည်း နေပူထဲမှာ မိုင်းများ၊ ဗုံးများကိုလိုက်လံရှင်းလင်းနေရ လမ်းတလျောက်နေ့ရောညပါလုံခြုံရေးပိုမို ယူနေရတယ်လို့ လဲ သိခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီခရီးမှာ ၀တ်မှုန်ရွှေရည်လေး တကယ်ပျော်နေမလား? ဒါမှမဟုတ်ချစ်ဦးသူ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ကိုသတိရလွမ်းဆွတ်နေသော်လည်း နီးရာဒါးနဲ့မိုးပြီး မေတ္တာတရားနဲ့ ရုပ်ဖြစ်စဉ်ကို လုယူ အနိုင်ကျင့် ခံရမှုကိုဝမ်းနည်းနေမလား ? ဒါတွေကတော့ မိန်းကလေးပဲသိမယ့်သူ့ ရင်တွင်းခံစားချက်တွေဖြစ်ကြောင်း ဂျာနယ်တခုက ရေးသားခဲ့မိလို့ ပိတ်ပင်ခံခဲ့ရဘူးပါတယ်။
နအဖစစ်အုပ်စုအကြီးအကဲဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ၏မြေ ဖိုးလပြည့်(ခ)နေရွှေသွေးအောင်က ၎င်း၏လုံခြုံရေးက်ုတာဝန်ယူပေးရသည့် ဆင်စွယ် အမည်ရှိလူမိုက်ဂိုဏ်းကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းထားကြောင်း၎င်းနှင့်နီးစပ်သည့်စီးပွားရေး
ငန်းရှင်တစ်ဦး၏သားဖြစ်သူကစာရေသူအား ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဂျွန်လတွင်ပြောပြခဲ့ဘူးသည်။နှစ်သစ်ကူး ကာလရန်ကုန်တွင်နေထိုင်စဉ်အတွင်း
ဖိုးလပြည့်ခေါ်နေရွှေသွေးအောင်မှ ကမာရွတ်အင်းလျားလမ်းတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပြသနာများကြောင့် ၎င်းအတွက်အန္တရာယ်များနေ၍ ထိုသို့ဖွဲ့စည်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိခဲ့ရသည်။
အမည်မဖော်လိုသောစီးပွားရေးငန်းရှင်တစ်ဦး၏သားဖြစ်သူကဖိုးလပြည့်ရဲ့ ဆင်စွယ် ဂိုဏ်း မှာပါသူတွေကရဲနဲ့စစ်တပ်ဘက်က လူကြီးသားသမီးတွေရယ်သူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့စီးပွားရေးလုပ် ငန်းရှင်ကြီးတွေရဲ့သားသမီးတွေလည်းပါတယ် နောက်သူ့ဘောလုံးကလပ်ကလူတွေလဲပါ တယ်ဟုထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုခဲ့သည်၊၊
နေရွှေသွေးအောင်နှင့် ဆင်စွယ်ဂိုဏ်းသားများမှာအင်လျားလမ်းရှိဆိုင်များတွင်တွေ.ဆုံမှုများ ရှိပြီးTabel Reserved တွင် ဆင်စွင် ဟု reserved လုပ်သည်ဟုသိခဲ့ရသည်။ဆင်စွယ်ဂိုဏ်း
သားများမှာနေရွှေသွေးအောင်နှင့်အတူရှိုးပွဲနှင့်ကလပ်များကိုအလကားဝင်လေ့ရှိပြီးနေရွှေ သွေးအောင် ဖြစ်သမျှ သူတာဝန်ယူမည် ဟုကတိ ပေးထားမှုအပေါ်တွင်သာယာနေသူများဖြစ်
ယခင်အုပ်ချုပ်ခဲ့ သော ဗိုလ်ချုပ်မှုး ကြီး သန်းေ၇ွှလက်ထက်မှာ ကထဲ ကရှိ သမျှ သယံဇာတ အကုန်လုံး ကိုကြိုတင်ေ၇ာင်းချသွားခဲ့ ၏ ။
ထို့ အပြင် မြစ်၊ချောင်း၊အင်း အိုင်၊တော တောင်တွေပါမကျန်အ လွန် ယုတ်မာစွာေ၇ာင်းချသွားခဲ့သည်။
ပြည်သူတွေ ကိုထာဝ၇ကျွန်ပြူအုပ်ချုပ်မည့် ၂၀၀၈ဖွဲ့ စည်းပုံကိုပြင်ဆင်၇ခက်ခဲစွာလုပ်ထားခဲ့ သည်။
လက်၇ှိ တွင်အနားယူသယောင်ယောင်နှင့်သမတဦးသိန်းစိန်နှင့် ဝန်ကြီးများ၊ ကာကွယ်ေ၇း ဦးစီးချုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်များ အခစားဝင်နေ၇ဆဲ။
သန်းေ၇ွှသာမကသူ့ မယား ကြိုင်ကြိုင် ၊မြေး ဖိုးလပြည့် တို့ကိုကြောက်နေ၇ဆဲဟု ဟစ်တိုင် ၀က်ဆိုက်တွင် အကျယ်တ၀င့် တင်ပြထားဘူးခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ (၁၁)ရက်နေ့တွင် နအဖစစ်ခေါင်းဆောင်၏ မြေးဖြစ်သူက ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်းနှင့် အချင်းများရာ မကျေနပ်သဖြင့် နေအိမ်ကို ခဲများဖြင့် ပစ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏မိဘများကို ကျေနပ်သည်အထိ ကန်တော့တောင်းပန်ခိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ဖိုးလပြည့်နှင့်အတူ လုံခြုံရေးအတွက် အနောက်ပိုင်းခရိုင်မှူး၊ ကမာရွက်မြို့နယ်မှူးနှင့် အခြားလုံခြုံရေးကား (၇) စီး လိုက်ပါခဲ့ပြီး ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ အိမ်တအိမ်သို့ တိုင်ချက်ဖွင့်သူများကို ခေါ်ဆောင်သွားကာ တာဝန်ရှိသူများကို အိမ်အပြင်တွင် စောင့်ခိုင်းထားခဲ့ကြောင်း အဆိုပါ အမည်မဖော်လိုသူက ဆက်ပြောသည်။
မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေက အင်္ဂလန် ဘောလုံးကလပ် တစ်ခု ဖြစ်သည့်
မန်ချက် စတာယူနိုက်တက် ဘောလုံးကလပ် အသင်း ကို ၀ယ်ယူရန် စီစဉ် ခဲ့ကြောင်း Wikileaks
၏ Embassy of Rangoon တွင် ယနေ့ ထပ်မံ ပေါက်ကြား မှု ဉ် ဖော်ပြထားသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက အင်္ဂလန် ကြေးစား ဘောလုံးကလပ် တစ်ခု ဖြစ်သည့် မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်
အသင်းကိုဝယ်ယူလိုသည် မှာ ၎င်း ၏ မြေးဖြစ်သူ ကို နေရွှေသွေးအောင် အတွက် ဖြစ်ကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန် သံရုံးက က သံအမတ်ကြီး အဆင့် သံရုံးယာယီတာဝန်ခံ Larry M. Dinger က ၀ါရှင်တန် သို့ ပို့ သည့် ကြေးနန်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
မန်ချက်စတာကလပ် အသင်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁ ဘီလျှံ ထိရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ပြုနိုင်သည် ဟု ကြေးနန်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
၀ီကီလိခ် တွင် ရန်ကုန်မြို့ အမေရိကန်သံရုံး၏ ကြေးနန်း ၈၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ထိုကြေးနန်း အများစု
ကို ဗြိတိန် ထုတ် ဂါဒီယန်း သတင်းစာကြီး က ရရှိထားပြီး တချို့ တစ်ဝက် ကို ဒါစပီ ဂယ်(လ) က ရရှိထားခဲ့သည်။
မြန်မာဝီကီလိခ် က ရရှိသောထိုကြေးနန်း မူရင်းတွင် ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့ ဟု ဖော်ပြထား
သည်။ အဆိုပါကြေးနန်းတွင် မြန်မာ နိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ ချုပ် ဥက္ကဌ နှင့် MAX အချိုရည် ကုမ္ပဏီပိုင်
ရှင် ဦးဇော်ဇော် ကို လည်း ရည်ညွန်း အကြောင်းအရာ နှင့် တကွ မန်ချက် စတာ ကလပ်အား ပိုင်
ဆိုင် နိုင်ရေး လုံးပန်းခဲ့ပုံများ ကို ဖော်ပြထားသည်။
မန်ချက်စတာ ဘောလုံးကလပ်သည် လည်း ကွင်းသစ် နှင့် သင်တန်းကွင်း အပါအ၀င် အသင်းသား
များ နေထိုင်ရန် ကုန်ကျစရိတ်တို့ အတွက် ငွေကြေးမြောက်မြားစွာ လိုအပ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးက မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့် အတွက် မန်ချက်စတာ ဘောလုံးကလပ် ကို ၀ယ်ယူရန်
သုံးစွဲ မည့် ငွေကြေးသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နာဂစ် မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်စဉ် အချိန်က နိုင်ငံတွင်း
ရှိ ဒုက္ခရောက် သူများ သို့ နိုင်ငံတကာမှ ကူညီသည့် ငွေပမာဏခန့် ဖြစ်သည်။
ဧပြီ ၂၂၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ မြေးဖြစ်သူ ဖိုးလပြည့်က အာဏာသုံးပြီး နာမည်ကျော် အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းကို ပိတ်ထားရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း ဖိုးလပြည့်နှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအ၀ိုင်း၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရှိခဲ့ရသည်။
ဖိုးလပြည့် ခေါ် နေရွှေသွေးအောင်မှာ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် နှင့် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်၏ သမီးရည်းစား ဆက်ဆံရေးကို ဖြတ်တောက်ရန် ဖိအားပေးခဲ့ပြီး စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့် ၀တ်မှုန်ရွှေရည်တို့၏ ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးမှုများအထိပင် လိုက်လံပိတ်ပင် ပြောဆိုမှုများ ရှိခဲ့သည်ဟု မီဒီယာနှင့် စာပေစိစစ်ရေး အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် ယခုနောက်ဆုံး မိုဘိုင်းဖုန်းကို ခေတ္တ ဖြတ်တောက်ထားရန် ကြိုးစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုတော် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နှင့် ၀တ်မှုန်ရွှေရည် တွဲလျက် သရုပ်ဆောင်မှု၊ ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးမှုများကို ဖိုးလပြည့်က သည်းမခံနိုင်သည့် အပြင် ယခု နောက်ဆုံး မွေးနေ့တွင် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများက မွေးနေ့ နှုတ်ဆက် စကား ပြောကြားခြင်း မပြုနိုင်အောင် အထိ အဘိုးဖြစ်သူ၏ အရှိန်အ၀ါ အာဏာ သုံးစွဲပြီး ကြိုးစားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း၏ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းအရ ဆိုလျှင် မိုဘိုင်းဖုန်း နံပါတ်တခုကို ပိတ်ရန် ဖုန်းငှားရမ်းသည့် စာချုပ် အထောက်အထား မူရင်းနှင့် အဆိုပါ ငှားရမ်းသူ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူကို တွဲလျက် တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ကတ်ပျောက်ဆုံးခြင်း သို့မဟုတ် အသုံး မပြုလို သဖြင့် ယာယီ ပိတ်လိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရွှေဂုံတိုင် မိုဘိုင်းရုံးသို့ လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုသို့မဟုတ်ပါက အစိုးရနှင့် ဆန့်ကျင်သည့် နိုင်ငံရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ဆက်နွယ်သည့် အတွက်ကြောင့် အထက် အမိန့် အရ လိုင်းပိတ်ခြင်း မျိုးသာ ရှိသည်ဟု ဖုန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် အငှား၊ အရောင်းအ၀ယ် လုပ်ကိုင်သူများက ပြောဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ကာလ အတွင်း နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများ၊ အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် ဆက်သွယ်သည့် မီဒီယာသမားများ၏ ဖုန်းအလုံးရေ ရာဂဏန်းနှင့်ချီ ဖြတ်တောက်ခြင်း ကို နိုင်ငံတော်မှ လုပ်ဆောင်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တစ်ယောက် ဒီတစ်ခါ တကယ်ကို ဒေါပွနေပါတယ် ၊ ဒေါပွမယ်ဆိုလည်း ဒေါပွစရာဖြစ်နေလို့ပါ ၊
အခုပဲ အောက်တိုဘာလ လယ်ရောက်ပါတော့မယ် အခုအချိန်အထိ သူနဲ့ သူ့ယောက်ျားကို သီတင်းကျွတ်မှာ လာကန်တော့ မယ် ဆိုပြီးကြိုတင်စာရင်းပေးထားတဲ့သူတွေ လူမစုံသေးလို့ပါတဲ့ ၊
အရင့်အရင်နှစ်တွေကဆို အောက်တိုဘာတောင်မရောက်သေးဘူး ၊ စက်တင်ဘာလဆန်းကတည်းကတင် သီတင်းကျွတ်ရင် လာကန်တော့ပါမယ် လက်ခံပေးပါ ဆိုတဲ့သူတွေက နိုဝင်ဘာတစ်လလုံး ရက်မအား ဒီဖင်ဘာလကုန်အထိ ကူသွားကြတာများပါတယ် ၊
အခုနှစ်တော့ သီတင်းကျွတ်ခါနီးနေပြီ စာရင်းလာပေးတဲ့သူတွေက လူမစုံသေးဖြစ်နေပါတယ် ၊ အစိုးရ လွှတ်တော် နဲ့ ကြံခိုင်ရေးက တပည့်သားမြေးတွေ ကတော့ လူစုံသလောက်ရှိနေပါပြီ ၊ လက်ရှိတပ်ထဲကလူတွေ မစုံသေးတာပါ ၊
လက်ရှိတပ်ထဲက လူတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး စာရင်းရောက်မလာသေးတဲ့အတွက် ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တစ်ယောက် ဒေါပွနေတာဖြစ်ပါတယ် ၊
စစ်တပ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့သူတွေ လက်တို့သတိပေးကြပါအုံး ၊ သီတင်းကျွတ်တော့ မယ်လို့ ၊ ဦးသန်းရွှေ နဲ့ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်တို့ကို ဝါကျွတ်ကန်တော့ရအုံးမယ်လို့ ၊ စားစရာမရှိရင်နေ လျှော်စရာတော့ရှိရမယ်လို့ ၊ ပြောပေးကြပါအုံးနော် . . .
အစိုးရ သတ်မှတ်ပေး သည့် ရန်ကုန် မြေဈေး
ကာလတန်ဖိုး စိစစ်သတ်မှတ်ရေး အဖွဲ့ (ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး)
“အစိုးရနဲ့ သဘောတူထားတာ ဒီတခေါက်က လူဦးရေကောက်ဖို့ဘာညာနဲ့ မှတ်ပုံတင်လုပ်ဖို့ အဲဒါပဲ၊ ဝဒေသမှာ ၁၆ မျိုးရှိတယ်၊ လူမျိုးစုံတယ်၊ ၄ သိန်း ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပါတယ်၊ အများစုက ဝများတာပေါ့၊ ရှမ်းရှိတယ်၊ တရုတ်ရှိတယ်၊ ပလောင်ရှိတယ်၊ အမျိုးမျိုးပဲ လူမျိုးစုံရှိတယ်၊”
ပြီးခဲ့တဲ့ သတင်းပတ်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသိန်းဇော်နဲ့ ဝ ခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီမှုရခဲ့တာလို့ သိရပါတယ်။
အစိုးရ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကို လာမယ့် ၂ဝ၁၄ ခုနှစ် မတ်လ ၃ဝ ရက်နေ့ကနေ ဧပြီလ ၁ဝ ရက်နေ့အထိ ၁၂ ရက်ကြာကောက်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ခါးသီးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကော်မရှင်ဥက္ကဌ ဦးတင်အေးဝန်ခံ
တက္ကသိုလ်များ ချန်ပီယံလိခ် ဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှငြင်သာ...
မိုးစက်ဝိုင် မော်စကိုမြို့သို့ရောက်ရှိလာပါက ရည်းစာ...
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲ ခါးသီးစရာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ကော်မရှင...